Relax kwaye uphumle kwilali yaseCheshire - I-Airbnb
Relax kwaye uphumle kwilali yaseCheshire
Yakhelwe phakathi kwe19th Century phantsi kwendlela yabucala emaphandleni eCheshire, iEden Cottage ilala iindwendwe ezi-5 kumagumbi okulala ama-3, kunye neebhedi ezi-2 zokumkani omkhulu (okanye amawele) kunye nenye.
Ilinen yokulala etofotofo, iitawuli kunye nezinto zangasese ezincomekayo zibandakanyiwe.
Le Cottage ikwabandakanya indawo yokuhlambela kunye neshawari, igumbi lokuhlala elinelanga elinesitovu esitshisa iinkuni, igumbi lokutyela, indawo esetyenziswayo enewasha kunye nekhitshi enkulu yale mihla exhotyiswe ngokupheleleyo eneengcango ezimbini ezikhokelela kwigadi ekhuselekileyo, ibbq kunye neendawo zokuhlala ezihonjisiweyo.
Ngeendawo zokutyela ezintle, ukuhamba okumangalisayo, ukukhwela ibhayisekile okungenamkhawulo, imidlalo yasemanzini, iikhosi zegalufa kunye neendawo zokuzonwabisa zemveli yonke nje imizuzu kude, i-Eden Cottage sisiseko esifanelekileyo sokuhlola eyona nto ingcono kuMntla Ntshona eNgilani naseNorth Wales.
Indawo entle yeemayile ezingama-34 ubude beSandstone Trail kunye neenqaba zeenduli ze-Iron Age kukuhamba ngemizuzu emihlanu ukusuka eCottage, ngelixa iHlathi iDelamere, iBeeston, iPeckforton kunye neCholmondeley Castles zifikeleleka lula ngemoto okanye ngebhayisekile. Ngaphesheya komda ukuya kuMntla Wales kukho iilwandle ezimangalisayo, iintaba kunye neenqaba ezingaphezulu zokuhlola.
Idolophu yentengiso eyimbali yaseFrodsham ingaphantsi kweemayile enye kwaye ibonelela ngoluhlu olubanzi lweevenkile ezibandakanya umthengisi wewayini kunye newayini, umbhaki wesintu kunye negrocer eluhlaza kunye nee-pubs, iindawo zokutyela kunye neekhefi ezigcinwe kwezinye zezakhiwo ezidwelisiweyo zedolophu yenkulungwane ye-17.
Sihlale eFrodsham iminyaka eli-18 kwaye sinokunikezela ngeengcebiso malunga nebhaso eliphumelele ibhaso lasekhaya, iindawo zokutyela kunye neentsuku zokuphuma.
Ukongeza kuhambo olumangalisayo kunye nedolophu eyimbali yentengiso yaseFrodsham, i-Eden Cottage ibekwe kwindawo efanelekileyo yokuhlola iChester's Roman Amphitheatre, iClock yase-Eastgate edumileyo, iMedieval Rows, iCathedral kunye nokuthenga okubanzi, kunye neMcArthur Glen Cheshire Oaks eyivenkile yokuthenga. Amaziko eLiverpool kunye neManchester City nawo afikeleleka lula ngololiwe okanye ngemoto.
Ukuba ujonge into encinci egcwele iadrenaline ngexesha lokuhlala kwakho, iHoverforce, iCatton Hall, iGoApe kunye neCheshire Aquapark zonke zingaphakathi kwemizuzu embalwa yeCottage. Mganyana kude uya kufumana umdyarho we-Oulton Park, i-ZipWorld, i-BounceNgaphantsi kunye ne-rafting yamanzi amhlophe, ngelixa i-Snowdon, intaba ephakamileyo eNgilani naseWales inikezela ngamava anzima kakhulu.
Sihlala kufutshane ne-Eden Cottage kwaye siya kukwamkela ngokobuqu ekufikeni kwakho, silayita kwangaphambili isitovu esibaswayo seenkuni kunye nokubonelela ngokutya okuyimfuneko ukuba kuyafuneka.